कला Archives - Page7of 10 - न्यूज सञ्जाल
कप्तानबारीमा जिल्लास्तरीय फुटबल हुने (टाइसिट सहित)
सिर्जनालाई विद्यालयस्तरीय भलिबलको उपाधि
जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा !
सताक्षीधाम मन्दिर विकास समितिमा विवाद !
अवैधरुपमा नेपाल प्रवेश गर्छन् बंगलादेशी
अर्जुनधारामा आँखा तथा विकलाङ्ग सेवा शिविर शुरु
‘ए मेरो हजुर ३’ को लण्डनमा रेड कार्पेट प्रिमियर
न्यूज सञ्जाल २० जेष्ठ २०७६, सोमबार १३:१५
एजेन्सी । अभिनेता अनमोल केसी र अभिनेत्री सुहाना थापा स्टारर चलचित्र 'ए मेरो हजुर ३' को ५१औं दिन प्रवेशसँगै लण्डनमा रेड कार्पेट प्रिमियर शो सम्पन्न गरेको छ । आईतवार ५१औं दिन मनाएको फिल्म प्रदर्शनका लागि झरना, सुहाना, सुनिल सहितका फिल्म ...
बोल्ड वर्षाको अष्ट्रेलियामा हट जात्रा (थप तस्वीर हेर्नुस्)
न्यूज सञ्जाल १९ जेष्ठ २०७६, आईतवार ११:१७
झापा । नायिका बर्षा राउत पछिल्लो समयकी निकै व्यस्त र चर्चित नायिका हुन् । उनी यतिबेला चलचित्र जात्रै जात्रा को प्रदर्शनको लागि चलचित्र निर्माण टिमसँग अष्ट्रेलिया पुगेकी छिन् । बर्षा पनि मिडियामा निकै छाइरहने सेलिब्रेटिमध्ये पर्ने गर्छिन् । उनी बेला ...
सुन्दरीले गरे पानी पुरी बेचेर सहयोग
न्यूज सञ्जाल १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:४८
झापा । इकोम मिस एसर्ईई प्रदेश १ का सहभागीले आज शुक्रबार आपाङ्ग बाल सरोकार केन्द्र अर्जनधारामा आश्रित बालबालिकाकालाई खाद्यान्न तथा विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन् । ड्रिम्स वल्र्ड इन्टरटेन्मेन्टको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताका सहभागीले चामल, दाल, चाउचाउ, बिस्कुट, टुथ पेष्ट, ब्रस ...
बिर्तामोडका ब्युटिसियनलाई कपालसम्बन्धी प्रशिक्षण
न्यूज सञ्जाल १३ जेष्ठ २०७६, सोमबार १८:२५
झापा । बिर्तामोड आसपासका सौन्दर्यकर्मी महिलाहरुलाई बेरिना कम्पनीले सोमबार एक दिने कपाल सौन्दर्यसम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रदान गरेको छ । अतिथि सदनमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बिर्तामोडका दुई सय ब्युटिसियनको सहभागिता रहेको बेरिना कम्पनीका बिक्री प्रमुख राजेश जालानले जानकारी दिए । अभिमुखीकरणमा सहभागी ...
अर्जुनधारामा ‘जय भोले’पछि ‘रातो टीका निधारमा’
न्यूज सञ्जाल १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार २०:१५
झापा । चलचित्र निर्माण तथा निर्देशक अशोक शर्मा कलाकारको जम्बो टोलीका साथ झापाको अर्जुनधाराधाम पुगेका छन् । चलचित्र 'अल्लारे' मा समावेश 'रातो टिका निधारमा' बोलको गीतलाई रिमेक गर्दै चलचित्र 'रातो टिका निधारमा' को घोषणा गरेसँगै छायांकनका लागि शर्मा झापा आएका ...
रिलिज भयो ‘पिएम नरेन्द्र मोदी’
न्यूज सञ्जाल १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०८:५२
एउटा सन्तुलित बायोपिकले दर्शकलाई इन्गेज गराउँछ, तर जुन कथाले पात्रको गुणगान मात्र गाउँछ अनि कन्ट्रोभर्सीलाई सफाइ दिन खोज्छ, यदि त्यो पात्रको समर्थक भए रुचाउनुहुन्छ होइन भने लत्याउनुहुन्छ। फिल्म ‘पिएम नरेन्द्र मोदी’लाई लत्याउन निकै सहज छ। भारतको लोकसभा चुनावको नतिजा लगतै ...
ट्राफिक सचेतनामा एसईई प्रतिस्पर्धी
न्यूज सञ्जाल ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १७:११
झापा । इकोम मिस एसईई प्रदेश १ का सहभागीहरुलाई सडक सुरक्षासम्बन्धी तालिम दिइएको छ । जिल्ला ट्राफ्रिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक नारायण आचार्यसहितको टोलीले ३४ जना सहभागीलाई तालिम प्रदान गरेको हो । प्रहरी निरीक्षक आचार्यले सडक दुर्घटनाको कारण, सडक ...
बिर्ता मिडियाले ल्यायो ‘उनको सामु’ (भिडियोसहित)
न्यूज सञ्जाल २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १४:५४
झापा । १५ वर्षअघि रेकर्डिङ गरिएको गीत ‘उनको सामु’ बिर्ता मिडियाले भिडियो ल्याएको छ । सनलाइट रेकर्डिङ स्टुडियो बिर्तामोडमा रेकर्ड गएिको गीतमा कृष्ण योञ्जनको स्वर रहेको छ । रतन राईको रचना रहेको गीतमा आनन्द सुब्बाले संगीत भरेका छन् । त्यस्तै, ...
विवाह अघि नै आमा बन्दै यी नायिका…
न्यूज सञ्जाल ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार ०९:२६
एजेन्सी/ बलिउड नायिका एमी ज्याकसनपछि अब ब्रुना अब्दुल्लाह पनि विवाह अघि नै आमा बन्न लागेकी छिन् । ब्रुना ब्राजिलियन मोडल हुन् र उनले थुप्रै हिन्दी फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् । उनले गत वर्षको जुलाईमा बेलायती प्रेमी एलान फ्रेजरसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी ...
एजेन्सी/ बलिउडका युवा नायक नायिका विवाह बन्धनमा बाँधिने क्रम जारी छ भने फिल्मी क्षेत्रका ‘मोस्ट एलिजिबल ब्याचलर’ सलमान खान ५३ वर्षको उमेरमा पनि अविवाहित छन् । थुप्रै वर्षदेखि प्रशंसकले सलमानलाई बारम्बार विवाह बारे प्रश्न सोधिरहेका छन् । सलमानको विवाहले निकै ...
६ मंसिर २०७६, शुक्रबार १८:०३
६ मंसिर २०७६, शुक्रबार १७:४२
६ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०८:५६
६ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०८:४५